Bahrain: Ramadany Iray sy Eid Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2017 6:06 GMT
Miankina amin'ny fijerena ara-bakieny ny volana vaovao ny fiandohan'nyvolana masin'ny Ramadany, miteraka datin'andro samihafa ho fanombohana azy any anivon'ireo sekta Miozolmana isankarazany. Tamin'ny taona 2009 ny Sionita sy ny Shiita tao Bahrain dia niaraka nanomboka ny volana taminà andro iray – ary nankalaza izany firaisana tsy fahita firy izany ny bilaogera iray.
Ao amin'ny Green Oasis, Ba7rani87 [ar] manoratra hoe:
Manaiky ny zavatra nitranga ary midera izany satria isantaona dia zavatra mifanohitra foana no ataonareo, manao izay mety hanetrenareo sy hitarainanareo momba azy ireny. Ekena ny marina ary isaorana i Allah, dia avy eo isaorantsika izy ireo noho io toedraharaha io. Mba zavatra tsara amin'izay aloaky ny vava, tahaka izay nitsaontsaonananreo nilaza zavatra tsy mahasoa. Io pejy io, izay efa navalona, dia mendrika ny hosaintsainina mandritry ny fotoana misimisy. Mety ho io ilay lesona mampangetaheta antsika ho an'ny hoavintsika. Raha tokony ho niatrika safidy telo samihafa isika, tsy nisy afa-tsy roa monja tamin'ity taona ity – ary dia hevitra mampisaraka vahoaka izy ireny.
Manoratra momba ny fifanarahana teo amin'ny Sionita sy ny Shiita i Ba7rani :
Fihetsika mendrika ny hoderaina ny fifanarahan'ny Sionita sy ny Shiita momba ny fijerena ny volana voalohany ho an'ny volan'ny Ramadany, izay tokony hosaintsainintsika no sady dinihantsika ny fahasamihafan'izy ireo. Ny fifanarahan-dry zareo androany dia afaka nampiray firenena iray ao anatin'ireo fankalazàny mandritra ilay volana – ny fiandohany, ny eo antenantenany ary ny Eid Al Fitr (izay manamarika ny fiafaràn'ilay volana). Fankalazàna marihan'ny firenena iray manontolo ireo rehetra ireo ary mahafinaritra izany hoe ny firenena iray manontolo no hiaraka hankalaza azy ireo amin'izao fotoana izao.
Manoratra toy izao i Ali Al Halwachi raha naneho hevitra tao amin'ilay lahatsoratra :
Marina ny anao ry rahalahiko. Tena mampalahelo tokoa ny fisianà fankalazàna Eid roa, ary fifadiankanina roa sy Iftars roa (famaranana ny fifadiankanina) ao anaty tokantrano iray.